အမည်မသိ ရောဂါကြောင့် အိန္ဒိယမှာ လူ တဦးသေ၊ နှစ်ရာ ဆေးကုသနေရ
Andhra Pradesh ပြည်နယ် အမည်မသိ ရောဂါကြောင့် ဆေးကုသခံနေသူများ
အမည်မသိ ရောဂါ တစ်ခုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက Andhra Pradesh ပြည်နယ်မှာ အနည်းဆုံး လူတစ်ဦး သေဆုံးပြီး လူ နှစ်ရာလောက် ဆေးရုံတင် ကုသခဲ့ရတယ်လို့ တနင်္လာနေ့က သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
အခုလို လူတွေ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို လက်ယက္ကန်းရုံတွေ ရှိရာ နာမည်ကြီး Eluru မြို့မှာ စနေနေ့က စပြီး သိရှိခဲ့ ကြတာပါ။
အဲဒီ အချိန်ကစလို့ ရောဂါ ခံစားရသူတွေအကြား ခေါင်းမူးတာ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတာနဲ့ သတိမေ့မျောသွားတာတွေ ခံစားခဲ့ကြရ တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါတယ်။
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာနဲ့ ခေါင်းမူး ဝေဒနာ ခံစားရသူ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဆေးရုံရောက် လာပြီးတဲ့နောက် တနင်္ဂနွေနေ့က သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ Press Trust of India သတင်းဌာနက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် ဘာကြောင့် ဒီရောဂါ ဖြစ်သလဲဆိုတာ တာဝန်ရှိသူတွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအထိတော့ အနီး အနားက ရေနမူနာတွေမှာ ညစ်ညမ်း အဆိပ်အတောက် ဖြစ်တာ မတွေ့ရသလို လူနာတွေမှာ COVID 19 ရောဂါပိုးလည်း ကင်းစင် ကြပါတယ်။
Andhra Pradesh ပြည်နယ်ဟာအိန္ဒိယမှာCOVID 19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူပေါင်း၈သိန်းကျော် ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အိန္ဒိယပြည်နယ်တွေလိုပဲ ဆေးရုံတွေ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေတဲ့ ပြည်နယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်Y.S. Jagan Mohan Reddyကအစိုးရဆေးရုံတစ်ရုံမှာလူနာတွေ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် N. Chandrababu Naidu ကတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြည့်အဝလုပ်ဖို့တွစ်တာကနေတောင်းဆိုထားပါတယ်။
အမညျမသိ ရောဂါကွောငျ့ အိန်ဒိယမှာ လူ တဦးသေ၊ နှဈရာ ဆေးကုသနရေ
အမညျမသိ ရောဂါ တဈခုကွောငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံ တောငျပိုငျးက Andhra Pradesh ပွညျနယျမှာ အနညျးဆုံး လူတဈဦး သဆေုံးပွီး လူ နှဈရာလောကျ ဆေးရုံတငျ ကုသခဲ့ရတယျလို့ တနင်ျလာနကေ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါလာပါတယျ။
အခုလို လူတှေ နထေိုငျမကောငျး ဖွဈတဲ့အကွောငျးကို လကျယက်ကနျးရုံတှေ ရှိရာ နာမညျကွီး Eluru မွို့မှာ စနနေကေ့ စပွီး သိရှိခဲ့ ကွတာပါ။
အဲဒီ အခြိနျကစလို့ ရောဂါ ခံစားရသူတှအေကွား ခေါငျးမူးတာ၊ စိုးရိမျကွောငျ့ကွတာနဲ့ သတိမမြေ့ောသှားတာတှေ ခံစားခဲ့ကွရ တယျလို့ ဆရာဝနျတှကေ ပွောပါတယျ။
ဝကျရူးပွနျရောဂါနဲ့ ဆငျတူတဲ့ ရောဂါ လက်ခဏာနဲ့ ခေါငျးမူး ဝဒေနာ ခံစားရသူ အသကျ ၄၅ နှဈအရှယျအမြိုးသားတဈဦးဆေးရုံရောကျ လာပွီးတဲ့နောကျ တနင်ျဂနှနေကေ့ သဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့ Press Trust of India သတငျးဌာနက ပွောပါတယျ။
လောလောဆယျ ဘာကွောငျ့ ဒီရောဂါ ဖွဈသလဲဆိုတာ တာဝနျရှိသူတှေ စုံစမျးစဈဆေးနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုအထိတော့ အနီး အနားက ရနေမူနာတှမှော ညဈညမျး အဆိပျအတောကျ ဖွဈတာ မတှရေ့သလို လူနာတှမှော COVID 19 ရောဂါပိုးလညျး ကငျးစငျ ကွပါတယျ။
Andhra Pradesh ပွညျနယျဟာအိန်ဒိယမှာCOVID 19 ရောဂါဖွဈပှားမှု အမြားဆုံးပွညျနယျတဈခုဖွဈပွီး လူပေါငျး၈သိနျးကြျော ကူးစကျခံခဲ့ရပါတယျ။ ကနျြတဲ့ အိန်ဒိယပွညျနယျတှလေိုပဲ ဆေးရုံတှေ မနိုငျမနငျးဖွဈနတေဲ့ ပွညျနယျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျY.S. Jagan Mohan Reddyကအစိုးရဆေးရုံတဈရုံမှာလူနာတှေ သှားရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျ N. Chandrababu Naidu ကတော့ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှအေပွညျ့အဝလုပျဖို့တှဈတာကနတေောငျးဆိုထားပါတယျ။